LKML: inopisa itsva nhau, Linux 5.0 rc7 yakagadzirira | Linux Vakapindwa muropa
LKML: inopisa itsva nhau, Linux 5.0 rc7 yagadzirira
Iwo maLKML akamutswa zvakare, ino nguva yekuzivisa kuuya kwesununguko nyowani, iyo nyowani vhezheni yekernel. Iye zvino tinogona kurodha pasi uye kuyedza iyo Linux Linux rc5.0, kureva kuti, wechinomwe Regedza Mumiriri weiyo 5.0 nhepfenyuro iyo yatanga iyi 2019. Ino nguva hakuna kumbove nekushamisika kana zvinhu zvisina kunaka, kusimudzira kwangoenderera sekuronga, uye kusiyana nekuburitswa kwakapfuura, kwanga kusiri chinhu rakakura uye rinorema.
Linus Torvalds anga achitungamira, senguva dzose, yekuzivisa kuvhurwa kweshanduro nyowani na LKML. Kana iwe uchida kurodha iyi nyowani vhezheni yemahara kernel, unogona kuzviita kubva ikozvino zvichienda pane kernel.org. Iwe unotoziva kuti kana iwe uri muyedzo we beta, iwe unozogona kumhan'ara matambudziko uye kubatsira kupolish vhezheni 5.0 kuti uigadzirire iyo kuburitswa kwayo kwekupedzisira iyo isingazononoke. Uye kana iwe uchida kuziva kuti chii chitsva, ramba uchiverenga ...
Iko kuburitsa kwakanyarara kwakanyarara, muchokwadi chiziviso chaTorvalds chakave zvakareruka uye chipfupi. Iye pachezvake anga achitarisira kutaura kuti iri isvondo rakanaka uye rakadzikama kwazvo sezvaanoda (maererano nebudiriro), uye kuti zvese zvaitaridzika sezvaitarisirwa. Zvimwe zvinhu zvitsva zvakawedzerwa maererano vatyairi kana vatongi, senge idzo dzinoreva iyo GPU, network, Input, md, block, kurira, nezvimwe.
Izvo zvakasara zve optimizations uye kururamisa kwemhosho kana zviputi vakakunda zvivakwa, senge ARM64, ARM, x86, uye kuona neKVM. Paive zvakare nekugadziriswa basa kunetiweki uye akati wandei (fileystem, nezvimwewo). Iko tsanga nyowani idiki («akanaka zvishoma«) Sezvo Linus akataura, uye kuti anozvida sei. Kana iwe uchida kuona iyo yakazara runyorwa rwe shanduko, iwe unogona kutarisa iyo email ye Linux Kernel MaList Lists muiyi link kuti ndinokusiya. Isu tinofara takamirira yekupedzisira vhezheni!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » LKML: inopisa itsva nhau, Linux 5.0 rc7 yagadzirira
Mapzen Mapping Platform Inobatanidza Linux Foundation